Oke Osimiri na-arị elu karịa ka e siri chee | Netwọk Mgbasa Ozi
Nrịgo elu nke oke osimiri bụ otu n’ime ihe na-echegbu onwe nke okpomoku zuru ụwa ọnụ. Ọtụtụ nde mmadụ na-ebi n'ụsọ mmiri na agwaetiti ndị dị ala, yabụ ọ bụrụ na emeghị ihe, obi abụọ adịghị ya na a ga-enwe oke nkwagharị n'ime iri afọ ole na ole.
Ruo ugbu a, echere na ọkwa nke oke osimiri rịrị elu na ọnụego 1,3-2mm kwa afọ; Otú ọ dị, ọhụrụ nnyocha gosiri na ọ na-ebili ngwa ngwa.
N’ime otu narị afọ gara aga ihe omuma ndi sayensi nwetara banyere oke elu oke osimiri sitere na ngbanye nke onodu uzo ndị dị n’akụkụ ụsọ oké osimiri. Ngwá ndị a bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara ole abawanyela na mpaghara ndị a, mana ha agaghị enye gị mkpokọta nsonaazụ dịka a ga-esi kpebisie ike, dị ka onye edemede edemede nke ọmụmụ Sönke Dangendorf kọwara, site na ngagharị nke ụwa nke eriri ụwa na usoro mgbanwe mgbanwe mpaghara nke na-esite na mgbanwe nrugharị oke osimiri, nkesa ikuku ma ọ bụ mmetụta mmetụta ndọda nke redistribution nke ọtụtụ mmiri na ice na ụwa.
Ndị ọkà mmụta sayensị nwere ugbu a altimita na, n’ime satellite, na-enyocha ọ̀tụ̀tụ̀ osimiri n’oké osimiri nile.
Yabụ, ịchọpụta etu oke oke osimiri si arị elu kemgbe narị afọ nke XNUMX, ihe ha mere bụ họrọ nke kachasị dịkarịsịrị ogologo na nke kachasị elu, ma mezie ihe ndị ahụ niile nwere ike inye nsonaazụ na-ezighi ezi wee were ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ịchọpụta na rue tupu 1990 ogo mmiri ebilila 1,1mm kwa afọ, mana kemgbe afọ ndị 1970 ọ gbagoro nke ukwu n'ihi mmetụta ụmụ mmadụ na gburugburu ebe obibi.
Site na ịrị elu nke okpomọkụ zuru ụwa ọnụ, agbaze nke okporo osisi na-eme ka ụsọ oké osimiri ghara ịdị nchebe.
I nwere ike ịgụ akwụkwọ zuru ezu ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Oke Osimiri na-arị elu ngwa ngwa karịa ka anyị siri chee
Kedu ka ihu igwe dị n'ọzara